Atoyerɛnkyɛm Ber Mu Mboa: Sɛ Atoyerɛnkyɛm Si A, Ɔdɔ Kenyan Hɛn Ma Yɛyɛ Biribi
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mfantse Mongolian Nahuatl (Central) Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Wɔ ahohia mber mu no, Jehovah Adasefo dze mboa ma hɔn mfɛfo agyedzifo nye afofor. Wɔyɛ iyi dze kyerɛ hɔn dɔ, adze a ɔyɛ nokwar Christianfo hɔn ahyɛnsewdze.—John 13:35.
Dza odzidzi do yi yɛ kyerɛwtohɔ kakraabi a ɔkyerɛ mboa a yɛdze ama wɔ abosoom 12 ntamu, ofitsi afe 2011 besi afe 2012 finimfin hɔ beebi. Kyerɛwnsɛm mu awerɛkyekyer a yɛdze kã mboa no ho aber nyina dze ma no nnkã kyerɛwtohɔ yi ho. Hɛn edwumayɛbea nkorbata no paw Atoyerɛnkyɛm Ber mu Egyinatukuw ma wɔyɛ dɛm mboa ahorow yi ho nhyehyɛɛ. Afei so, asafo ahorow a ɔbembɛn bea a atoyerɛnkyɛm no esi no dze hɔn ho hyɛ mboa no mu aber nyina.
Japan: Wɔ March 11, 2011 no, asaasewosow bi sii wɔ Japan etsifi afamu, na iyi dze nsuyirii so bae. Atoyerɛnkyɛm yi kãa nyimpa ɔpehaha pii. Jehovah Adasefo a wɔwɔ wiadze mfɛndzanan nyina fi ayamuyie mu dze hɔn sika, nyimdzee, nye hɔn ahodze boae maa wosiesiee dza asɛɛ no. Hwɛ hɛn video a ɔkyerɛ mboa a yɛdze kɛmae aber a asaasewosow bi sii wɔ Japan no.
Brazil: Nsuyirii, asaasedwuruw, nye dɛtsedwuruw kunkum nyimpa ɔhaha pii. Dza Jehovah Adasefo yɛe wɔ iyi ho nye dɛ, wɔdze edziban a ɔnnsɛɛ ntsɛm tɔɔn 42, nsu mbɔdambɔ 20,000, ntar tɔɔn 10, semina na dza ɔkekã ho tɔɔn 5, ndur nye ndzɛmba afofor pii kɔr bea a atoyerɛnkyɛm no esi no.
Congo (Brazzaville): Aber a topaa bi towee no, Jehovah Adasefo hɔn efie 4 sɛɛe, na Adasefo afofor 28 so hɔn efie kɔr kyew. Wɔdze edziban nye ntar kɛmaa hɔn a hɔn ho akã no, na Adasefo a wɔwɔ apaamu hɔ no maa mbusua a atoyerɛnkyɛm no kãa hɔn no bɛtsenaa hɔn efie.
Congo (Kinshasa): Wɔdze ndur maa nyimpa a woenya ayamutu. Aber a nsu kɛse bi tɔree yirii sɛɛ nkorɔfo ndzɛmba no, wɔdze ntar kɛmaa hɔn. Wɔdze ndur, aba a wodua, nye ntar tɔɔn pii kɛmaa nyimpa a woeguan efi hɔn man mu osian akodzi ntsi.
Venezuela: Nsu kɛse bi a ɔtɔree maa nsuyirii nye dɛtsedwuruw sii. Atoyerɛnkyɛm ber mu egyinatukuw boaa Adasefo 288 a atoyerɛnkyɛm no kãa hɔn no. Wosisii efie afofor bɔbor 50. Nkyii so, atoyerɛnkyɛm ber mu egyinatukuw roboa hɔn a wɔtsetse mbea a Lake Valencia tum yir haw hɔn no.
Philippines: Ehum kɛse bi dze nsuyirii baa ɔman ne fã bi. Hɛn nkorbata a ɔhwɛ hɔ no dze edziban nye ntar pii monaa hɔn a hɔn ho akã no, na aber a nsuyirii no gyaae no, Adasefo no boae ma wosiesiee hɔ.
Canada: Aber a ogya bi hyeew kwaa kɛse bi wɔ Alberta no, Slave Lake Asafo no nsa kãa ntoboa pii fii Adasefo a wɔwɔ apaamu hɔ no hɔ dɛ wɔmfa mboa nsiesie ndzɛmba. Osiandɛ nna asafo yi nnhia sika pii yi nyinara ntsi, wɔdze bɛyɛ sika yi ne fã kɔboaa mbea afofor a atoyerɛnkyɛm esisi wɔ wiadze n’afã afofor.
Côte d’Ivoire: Ansaana ɔkõ bi ribesi, aber a ɔkõ no rokɔ do, nye ɔkõ no ekyir no, wɔmaa hɔn a woehia hɔn no nsa kãa amonadze, bea a wɔbɛda, nye eduyɛ.
Fiji: Osian nsuyirii kɛse bi a nsutɔree bi dze bae no ntsi, Adasefo mbusua 192 a nsuyirii no kãa hɔn no hweer hɔn nhaban, dza wodzi, hɔn sika nye hɔn edwuma. Wɔkɛmaa hɔn atoyerɛnkyɛm ber mu edziban.
Ghana: Wɔkɛmaa hɔn a nsuyirii sɛɛ hɔn ndzɛmba wɔ ɔman no no bokã afamu no edziban nye aba a wobodua, na wɔmemaa hɔn efie afofor so.
United States: Wɔ amantɔw ahorow ebiasa mu no, ehum akɛse bi sɛɛ Adasefo efie 12, na ɔmaa hɔn efie 66 so kɔr kyew. Ɔwɔ mu dɛ hɔn a nna hɔn ho akã no mu fã kɛsenara wɔ nhyeɔranse (insurance) dze, naaso wɔyɛɛ nhyehyɛɛ dze sika kɔboaa hɔn.
Argentina: Jehovah Adasefo asafo ahorow kɔboaa hɔn a wɔtsetse ɔman no n’anaafo afamu no, aber a nsõ fir ogyabepɔw mu sɛɛ hɔn efie no.
Mozambique: Wɔdze edziban kɛmaa nyimpa bɔbor 1,000 a ɔpɛ dzendzen sii wɔ hɔn kurow mu no.
Nigeria: Wɔdze sika afamu mboa kɛmaa Adasefo eduonu anan bi a wopiraa dzendzenndzen wɔ bɔɔs akwanhyia bi mu no. Bio so, wɔsan dze mboa kɛmaa nyimpa pii a wɔtse ɔman no n’etsifi afamu a osian ɔsom nye ebusua ntamu wentwiwentwi ntsi wɔahwer hɔn efie no.
Benin: Wɔdze ndur, ntar, ntontombuw, nsupa, nye dabew maa hɔn a nsuyirii kɛse bi kãa hɔn no.
Dominican Republic: Aber a mframa gyampaturdu a ne dzin dze Irene tui n’ekyir no, asafo ahorow a wɔwɔ apaamu hɔ no kɔboae maa wosiesiee adan a asɛɛsɛɛ no, na wɔdze ndzɛmba ahorow so kɔboae.
Ethiopia: Wɔ mbea ahorow ebien bi a ɔpɛ dzendzen bi sii nye bea kor so a nsu yirii faa hɔ no, wɔdze sika kɔboaa hɔn a hɔnho akã no dze dzii hɔn ehiadze ho dwuma.
Kenya: Wɔdze sika afamu mboa kɛmaa hɔn a ɔpɛ dzendzen esi hɔn kurow mu no.
Malawi: Wɔdze mboa kɛmaa hɔn a ɔkõ ntsi woetu efi hɔn kurow mu akɛtsena bea a ne dzin dze Dzaleka no.
Nepal: Asaasedwuruw bi sɛɛ Ɔdasefo bi ne fie pasaa. Wɔpɛɛ beebi a ɔbɛda wɔ ber tsiabaa mu maa no, na asafo a ɔwɔ apaamu hɔ no dze mboa a ohia maa no.
Papua New Guinea: Nyimpa bi dze enyidaho hyeew Adasefo baawɔtwe bi hɔn efie. Wɔyɛɛ nhyehyɛɛ sii fofor maa hɔn.
Romania: Nsuyirii bi maa Adasefo bi hweer hɔn efie. Wɔboaa hɔn ma wosisii efie afofor.
Mali: Wɔdze sika fi Senegal a ɔbɛn hɔ no kɛmaa nyimpa binom, a worihyia edzibankɔm osian ɔpɛ a osii ma woenntwa ndɔbaa papa biara ntsi no.
Sierra Leone: Adasefo adatserfo a wofi France dze eduyɛ ho mboa kɛmaa Jehovah Adasefo a wɔtsetse mbea a nna akodzi esi no.
Thailand: Nsuyirii kɛse bi sɛɛ ndzɛmba pii wɔ amansin pii mu. Atoyerɛnkyɛm ber mu mboakuw yɛɛ efie ahorow 100 nye Ahendzi Asa ahorow 6 yie, na wosiesiee ho so.
Czech Republic: Aber a nsuyirii bi sɛɛ efie ahorow pii wɔ Czech Republic ekyir no, Adasefo a wɔwɔ Slovakia nyaa atoyerɛnkyɛm ber mu mboa no mu kyɛfa.
Sri Lanka: Wɔaka kakraabi ma woeewie atoyerɛnkyɛm ber mu mboa a wɔdze risiesie dza tsunami bi sɛɛ no no nyinara.
Sudan: Wɔdze edziban, ntar, mpaboa, nye rɔba a wɔdze si dan kɛmaa Jehovah Adasefo a wɔwɔ ɔman no mu a akodzi ntsi woeguan efi hɔn efie mu no.
Tanzania: Aber a nsuyirii bi sii no, mbusua 14 na wɔhweer hɔn ndzɛmba. Asafo ahorow a ɔwɔ apaamu hɔ no dze ntar nye efie ndzɛmba kɔboaa mbusua yi. Fie kor dze, wosii no fofor.
Zimbabwe: Ɔpɛ ama ɔkɔm esi ɔman no ne fã bi. Wɔdze edziban nye sika akɛma hɔn a iyi akã hɔn no.
Burundi: Wɔdze atoyerɛnkyɛm ber mu mboa a eduyɛ kã ho akɛma hɔn a osian akodzi ntsi woeguan efi hɔn man mu no.
Philippines Ehum Gyampaturdu No—Gyedzi Dzi Hu Do Konyim
Mboa A Wɔdze Kɛmae Aber A Ehum Gyampaturdu A Wɔfrɛ No Sandy Tui No—Ɔdɔ Reyɛ Edwuma